Klopp oo jawaab adag ka bixiyay hadalkii ka soo yeeray macalinka Man United ee Ole Gunnar Solskjær – Gool FM
(Manchester) 20 Okt 2019. Macalinka kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay in kulanka dhex mari doona maqribka labada kooxood ee Man United iyo Liverpool ay suurtogal noqon karto inuu yimaado waqdiga saxda ah ee Ole Gunnar Solskjær si uu dib ugu helo dheeli tirnaantooda horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan.
Manchester United ayaa maqribka ku soo dhaweyn doonta garoonkeeda Old Trafford hogaamiyaasha horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan ee Liverpool, iyadoo kulankan uu yahay mid si weyn loo wada sugayo.
Jürgen Klopp ayaa shir jaa’id uu ka soo muuqday wuxuu diirada ku saaray kulanka ay maanta booqan doonaan kooxda Manchester United waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay nala ciyaaraan, isla markaana ay na sugayaan, waxay dheheen waxaa haatan nahay koox dhameystiran, waxaan u maleynaynaa inay jiraan kooxo badan oo aan jeclayn inay hada naga horyimaadaan”.
“Waxay u muuqataa in Man United ay tahay kooxda kaliya ee dooneysa inay na wajahdo, waa inaan hubinnaa inay tani tahay fikrad khaldan iyo inkale”.
“Laakiin tani waa wax iska caadi ah, sidoo kale ayaan sameyn lahaa haddii aan joogi lahaa booskooda, tani waa ciyaar bedeli karta adduunka, taasi waa sida saxda ah ee aan sameyn lahaa si aan u dhiirrigeliyo kooxdeyda, haddaba maxaa diidaya in Ole Gunnar Solskjær uu sidaas sameeyo?”.